Ebee iri nri na Huesca? ebe, ebe na nri ndị a na-ahụkarị | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Spain obodo, Gastronomy
Ebe iri nri na Huesca bụ ajụjụ a na-ajụkarị n'etiti ndị ọbịa na obodo Aragonese. Nke a bụ n'ihi na ikekwe gastronomy ya abụghị ihe ama dịka nke Basque Country ma ọ bụ nke Galicia. Agbanyeghị, nri Huesca ọkachasị na Aragonese n'ozuzu ya bụ nke magburu onwe ya mma, dabere na ngwaahịa nke ala ahụ ma jiri nlezianya na nkọwa dị ezigbo ụtọ.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ebe iri nri na Huesca, anyị ga - egosi gị ebe kachasị mma gastronomic si n'obodo. Ma, karịa ihe niile, anyị ga-agwa gị gbasara ha efere a na-ahụkarị yabụ, ozugbo ị họpụtara ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ị makwaara ihe ịtụ.
1 Gastronomy nke Huesca
2 Gastfọdụ ihe omume gastronomic dị na Huesca
3 Ebe iri nri na Huesca
3.2 Lọ elu
3.3 Flor, a kpochapụwo n'etiti Ogwe ebe iri nri na Huesca
3.7 Ndị Goyosa
3.8 Akụkọ ifo
Gastronomy nke Huesca
Dịka mpaghara na-enweghị ụsọ mmiri, Huesca nwere nri esi na ya anụ ndị ahụ y akwụkwọ nri. Ọ gụnyekwara azụ mana, n’ụzọ ezi uche dị na ya, nke a na-esite n’osimiri (ma e wezụga cod). N'ime ngwaahịa nke ala ahụ, ndị elu na-ede ede, las gwongworo nke ndagwurugwu Ansó, onye agwa nke Embún, onye endaịv ma ọ bụ nwa Atụrụ, nke bu nwa aturu.
Na ihe a niile, efere dị ka ugwu asparagus, nke enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na akwukwo nri a, mana emere, kpomkwem, na ọdụ nne atụrụ. Ma ịkọwapụta nke kacha mma nke atụrụ bụ ka igbuasu, ya bụ, a roara n’ọkụ n’ọkụ.
N'etiti anụ, anyị nwere ike ịkọ banyere beef bekee Huesca, las Ibe anụ ezi anụ Aragonese na Embún boliches, ndi ji akuru na agwa nti. Banyere ndị egwuregwu, ha bụ ọmarịcha nri dị ka ụbiga mmanya ókè, nke mmanya na-egbu egbunke kpalakwukwu na salmorejo na partridges na embers. Kwesịrị ịnwale ụfọdụ sausaji dịka sọseeji de Graus na arbiello site na ubi nke Inyinya.
Banyere azụ, nri nke Huesca na-ekere òkè dị mkpa na cod, nke a kwadebere al ajoarriero, baturra ma ọ bụ fritters. Na kwa trout, nke ị nwere ike ịnwe dị ka isi ọmụmụ mgbe ole na ole ofe isi awọ o julius. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe dị ike karị, ị nwere mpekere nke onye ọzụzụ atụrụ, las obi ụtọ ma ọ bụ oku recao nke Binéfar, nke nwere agwa, poteto na osikapa.
N'ikpeazụ, dị ka desserts, ị ga-anwale mmiri ara ehi eghere eghe, na achicha anisenke nun rie ude ma ọ bụ achịcha. Ọzọkwa ahụkarị bụ borage crepes, nke gbagharịa ma ọ bụ coc, a quince achicha na mgwakota agwa. Na, iji saa nri gị, ị nwere mmanya mara mma nke aha mmalite Somontano, nke emepụtara tumadi na mpaghara Barbastro.
Gastfọdụ ihe omume gastronomic dị na Huesca
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na ịmara ebe ị ga-eri nri na Huesca na ihe ị ga-enye iwu, ị ga-enwekwa mmasị ịmụ banyere ụfọdụ ihe gastronomic na mpaghara Aragonese. N'ihi ya, na Escalona the Ememe Chireta, soseji nke a na-eji nri afọ ya na osikapa esi nri ebe atụrụ si.
Onye na-azụ atụrụ
N'otu aka ahụ, na Barbastro e nwere oriri na nkwari, a Ememme Somontano na ụfọdụ ụbọchị ndụ m. Maka akụkụ ya, isi obodo na-ejidekarị a ụbọchị gastronomic nke nri ugwu na ihe omume ndị ọzọ metụtara atụrụ, otu n'ime ọla nke Aragonese gastronomy. Ọ bụkwa omenala, n'oge obere ememme ma ọ bụ San Vicente (Jenụwarị 22), ịnụ ụtọ poteto a roara n'ọkụ, soseji na churros.
Ozugbo anyị gwara gị banyere gastronomy nke Huesca na ụfọdụ n'ime usoro nri ya, anyị ga-akọwa ebe a ga-eri nri na Huesca, ya bụ, kedu ebe gastronomic dị na obodo ahụ na ụfọdụ ụlọ nri ya.
Ga-ahụ mpaghara nke ogwe osisi na tapas n'obodo Huesca na San Lorenzo agbata obi, nke Akwa Coso na Martínez de Velasco uzo. Ọ bụ ihe a maara dị ka Ọkọlọtọ. Enwekwara ezi nhazi nke ulo oru uzo nke Pyrenees na na Ramón y Cajal ije. Banyere ụlọ oriri na ọ theụ bestụ kacha mara amara na Huesca, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a.
Ebe a nwere kpakpando Michelin na suns Repsol abuo. Ọ e ji akwadebe oge a nri ma gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịnala na ọpụrụiche bụ Ezi ntụziaka dabere na nwa truffle. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma iri nri na Huesca.
Enyere ya na kpakpando Michelin, na-eji ngwaahịa ala na nke kachasị elu dị ka akụrụngwa iji kwadebe menu nke kpochapụwo na nke ugbu a. Ke adianade do, ọ na-enye gị a akatabi okop menu.
Flor, a kpochapụwo n'etiti Ogwe ebe iri nri na Huesca
Emepeela ebe a ọtụtụ afọ n'ihi ezigbo nri ya. N'etiti ya specialties bụ beef tenderloin na truffle ihendori na Duck foie achicha na confit yabasị.
Ọ bụ ụlọ mmanya tapas mbụ iji nweta kpakpando Michelin, yabụ ihe na-ahụkarị ya bụ iri na mmanya. Ọzọkwa, kichin mepere ka ị wee lelee onye siri nri na ndị na-enyere ya aka n'ọrụ. Otu n'ime ọpụrụiche ya bụ tapas nke foie micuit, na octopus na ezi dewlap na crystal coca na Cantabrian anchovy.
Ọ pụtara ìhè na nkọwapụta ya grill, n'ezie na-atọ ụtọ. N'ime nri ha, ọnụ na-acha uhie uhie na mkpụrụ osisi uhie na foie, nke Iberian anụ oriri carpaccio, nke ghere eghe anụ ribeye na atịchok grilled na ali-oli.
Ebe a na - azụta akụrụngwa ya n'aka obere ndị na - emepụta ihe na mpaghara ahụ gburugburu ebe obibi akuku. Ha na ha eji esi nri dika Tensino suckling pig na Juda abụọ na ero emulsionnke La Chya chickpeas nwere foie na Achịcha karọt na chiiz Fonz.
Pụrụ iche na nri enweghị gluten, onye isi ya, bụ Mateo Sierra, bụ onye asọmpi na Master Chef. Ọ na-enye gastro-tapas dị ka Osmotized kukumba cannelloni na oké osimiri bream tartare ndochi o ubu atụrụ na mmanụ a honeyụ na garlic ekwupụta na asara n'ọkụ yabasị.
Site na ochicho mma dabere na ihe nkiri ahụ bụ 'Pulp Fiction', ọ na-enye tapas ihe ụtọ dị ka beef tripe, nke nwa atụrụ isi cannelloni na anụ steak. N'etiti ebe iri nri na Huesca, nke a bụ otu n'ime ihe ndị mbụ.
Na mmechi, ọ bụrụ na ị na-eche ebe ị ga-eri nri na Huesca na mpaghara ya, ị nweela amaokwu ụfọdụ. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ na obodo Aragonese dị ka Biputere, nke Candanchu, na Adaala, nke Grịl Trinche o Ụlọ m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Gastronomy » Ebe iri nri na Huesca